XOG: M/weyne Farmaajo oo si deg deg ah ugu dhoofay dalka Masar iyo xog laga helay. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho aan horey loo sii shaacin ugu dhoofay goor dhaw dalka Masar, oo uu maalmihii u dambeeyey kusugnaa wasiirkiisa Arrimaha dibada Axmed Ciise Cawad.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lafilayaa in ay booqashadiisan deg deg ah qaadato ku dhawaad 2 maalmood, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo Madaxtooyada Soomaaliya.
Inta uu joogo Masar wuxuu la kulmayaa Madaxweynaha Masar Abdifitaax Al Siisii oo ay ka wada hadli doonaan iskaashiga labada dal, arrimaha Carabta ka aloosan, waxaana si gaar ah loo soo qaadi doona in dawladda Faderaalku ay ka weecato dhabaha ay hadda hayso.
Madaxweynaha ayaa hadda doonaya in laga yareeyo culeysada siyaasadeed ee ka haysta dhanka mucaaradka, gaar ahaana cabsida ugu badan ayuu ka qabaa in ay dawladda Imaaraatku hadda abaabulayso kulamada ka socda magaalada Nairobi.
Safarkiisan wuxuu ku beegmayaa waqti xasaasi ah oo uu shalay qeylo dhaan ka muujiyey kulamada Nairobi, wuxuuna sheegay in dawladda la duminayo oo ay ka dambeeyaan dad ugu yeeray kuwa shisheeye u adeegaya.
Madaxtooyada Soomaaliya labo daran mid doora ayaa hortaala, kuwaas oo kala ah in uu Sacuudiga, Imaaraatka iyo Masar xulafadooda hadda la safto, meeshana ka saaro Turkiga iyo Qadar iyo in uu ku sii jiro dabka siyaasadeed.